Ukunikezelwa kweNdawo yokuHlahlwa kweHid, iHid Led Bulb, I-Lid Hed Led From Manufacturer yaseChina
Inkcazo:Ukutshintshwa kweLed Hed,Ubunzima beLed Hid,I-Led Led Lamp,I-Hed Led Corn Replacement,,
Home > Imveliso > I-LID Replacement Replacement
Iintlobo zeMveliso ze- I-LID Replacement Replacement , singabakhiqizi abakhethiweyo baseChina, Ukutshintshwa kweLed Hed , Ubunzima beLed Hid ababoneleli / umkhiqizo, iimveliso eziphezulu zexabiso eliphezulu ze-R & D kunye nokuvelisa, sinemisebenzi epheleleyo emva kokuthengisa kunye nenkxaso yobuchwepheshe. Khangela phambili ekusebenzisaneni kwakho!
Ukutshintshwa kwe - HID Led Reped yenziwe ngokukodwa yenziwe ngokukhethekileyo ekusebenziseni kwindawo yokupakisha yokuphezulu kunye neendawo zokuhlala. I-LID Replacement Replacement yindlela elula kwaye elula yokubuyisela iikiti njengenye indlela yokuthenga izinto ezintsha.
I-Bbier ukukhanyisa ngokubanzi inikeza uluhlu olubanzi lweetampu zePost Top Led Retrofit zokuthengisa, izibhedlele, ukunakekelwa kwezempilo, iofisi, izicelo zezorhwebo kunye nekhaya. I-Hid Led Bulb yamalungiselelo aphezulu eposti ayingxenye enye kwisimo se-metal halide kunye ne-HPS bulbs. I-Commercial yethu iholele iposi ephezulu, i-post phezulu iholele izibane, i-post high light light led leditit zenzelwe ukuthatha indawo ye-Metal Halide ne-High Pressure ye-Sodium izibane, indawo yokubeka indawo yokupaka igaraji kunye ne-post light light retrofit Izibane eziphezulu. Amanqampu aphezulu e-Post Led Retrofit afaka izibane ze-HID kufika kwi-400W HID. Iqhubela phambili i-Active Cooling iteknoloji ithuthukisa ukusebenza kwe-thermal kwaye ihambisa umbane ophezulu kakhulu kunye ne-LED eseleyo kunye nobomi bomqhubi ngokubhekiselele kwizibane ezithintela ukupholisa ngokukhawuleza. Zonke iimodeli zivavanywa yi-UL ngaphantsi kwe-1598C eqinisekisa ukuba ukulungiswa kwe-retrofitted kugcina ukuqinisekiswa kokukhuselwa kunye nokuvunyelwa ngu-UL kumalungiselelo afakwe. Ubomi beLamp Led Led ngexesha eliyi-50,000 ireyithi lilinganiswe ubomi be-LED (exhaswa yi-LM80 kunye ne-IES iingxelo), i- Hid Led Corn Replacemen isine-Warranty Limited yeminyaka emihlanu.
Ukutshintshwa kweLed Hed Ubunzima beLed Hid I-Led Led Lamp I-Hed Led Corn Replacement Ukutshintshwa kwezibane